Akụkọ gam akporo: hapụ, akụkọ, asịrị na ndị ọzọ! | Gam akporo (Peeji nke 15)
OnePlus 6T nwere ike ịhapụ ụbọchị ịhapụ ya
Egosiputa ubochi ibido nke OnePlus 6T. Mara ụbọchị ụbọchị ọhụụ ọhụrụ nke akara ndị China ga-abata.
Ihe enyemaka Google enyerelarị ihe ruru 10.000 smart smart
Ka ọ dị ugbu a, ọnụọgụ nke ngwaọrụ ndị dabara na Google Assistant bụ 10.000, ọnụọgụ mara mma mana nke ahụ anaghị agafe Alexa Alexa
Usoro Moto G7 ga-agụnye ekwentị anọ
Motorola ga-ebido ekwentị anọ na Moto G7. Chọpụta ihe banyere ụdị ekwentị mbinye aka a maka afọ ọzọ.
Samsung laghachiri n'ụzọ nke uru ndekọ
Samsung na-eji uru stratospheric enweta ya na nkeji nke atọ nke afọ. Ihuenyo na ebe nchekwa ahịa nwere obere ụta.
[APK] Otu esi eme ka isiokwu gbara ọchịchịrị rụọ ọrụ na Akụkọ Google, ngwa akụkọ nke nnukwu G
Anyị na-egosi gị otu esi eme ka isiokwu gbara ọchịchịrị na ụdị 5.5 nke Google News, ngwa ọhụụ ọhụrụ G dị na mba ụfọdụ.
Ọ bụ ọrụ gọọmentị: WhatsApp ga-ewebata mgbasa ozi na 2019
Kwadoro: WhatsApp ga-ewebata mgbasa ozi na ngwa ahụ na 2019. Chọpụta ihe banyere mbata nke mgbasa ozi na ngwa ahụ na 2019.
Samsung na-eduga ahịa ekwentị dị elu na India
Samsung dị ka ụlọ ọrụ nwere oke kachasị nke ahịa ekwentị kacha elu na India. Mụtakwuo maka akụkọ a.
Iri na-etinye njirimara ihu na Honor nke Ndị Eze na China mgbe egwu riri ahụ na egwuregwu vidio
Ndị otu mba China, Tencet, ga-etinye mmata ihu na Honor of Kings na China, mgbe ị addictionụbiga mmanya oke na egwuregwu vidio na mba ahụ na-ata ahụhụ.
Nokia 7.1 bụ ọkwa gọọmentị: gosipụta na ọkwa, SD636 na ndị ọzọ
Nokia 7.1 bụ ọrụ ugbu a. Mara njirimara teknụzụ niile na ọnụahịa nke ekwentị ọhụrụ a dị n'etiti!
Etu esi bulite faịlụ na Google Drive site na gam akporo
Nnọọ mmadụ ole na ole bụ ndị ọrụ taa anaghị eji ọrụ nchekwa na ...
[APK] Otu esi eme ka isiokwu gbara ọchịchịrị na Gboard rụọ ọrụ mgbe ejiri batrị batrị
Na Gboard kachasị ọhụrụ, enwere ike rụọ ọrụ isiokwu gbara ọchịchịrị ugbu a mgbe ahọpụtara ọnọdụ nchekwa batrị gam akporo.
A na-enyopụta ọdịdị nke Sony Xperia XA3 na ntụgharị ọhụrụ [Video]
A haziri atụmatụ nke Xperia XA3 na vidiyo vidiyo ọhụrụ 360. Mara ọdịdị nke ọdụ ụgbọ mmiri Japan ọzọ.
Na-egosi ụbọchị ngosi nke Xiaomi Mi Mix 3
Anyị amatala ụbọchị ngosi nke Xiaomi Mi Mix 3. Chọpụta karịa maka ụbọchị nke njedebe dị elu nke Xiaomi ga-abata.
Huawei Mate 20 na-egosi na Geekbench na Kirin 980
Nwunye Huawei nke 20 na-egosi na Geekbench Benchmark na Kirin 980. Chọpụta ọnụọgụ nke ejiri dekọọ ya na nchekwa data.
Versiondị nke 5 nke Microsoft Launcher jikọrọ ekwentị gị na PC gị karịa mgbe ọ bụla
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe ahụmịhe dị n'otu n'etiti PC na ekwentị gị, yana Microsoft Launcher, n'ụdị nke 5, ihe niile ga-adị mfe.
Site na WhatsApp ị nwere ike ugbu a kpọọ vidiyo na windo na-ese n'elu mmiri nke YouTube, Facebook na Instagram
Ebe ọ bụ na beta nke ikpeazụ ị nwere ike igwu egwu vidiyo YouTube na WhatsApp na ọnọdụ windo nke na-enye gị ohere ịga n'ihu na-akparịta ụka.
TheAwards: onyinye maka egwuregwu kacha mma na ngwa na Spain na 2018
TheAwards: Onyinye maka egwuregwu kacha mma na ngwa na Spain na 2018. Chọpụta ihe banyere ememme onyinye a maka egwuregwu egwuregwu na ngwa ngwa.
Nweta ego mbelata 50% na ọgbakọ Champions League niile na oroma
Onyinye ego 50% na oge niile Champions League na Orange. Chọpụta karịa maka nkwalite ndị ọrụ a rue Nọvemba 5.
MásMóvil na-ewebata ekwentị Huawei, BQ ma ọ bụ LG na eriri ya na ọnụọgụ ekwentị ya
Were ụdị Huawei ma ọ bụ LG na ọnụego mgbanwe na MásMóvil. Chọpụta karịa maka nkwalite a na-enye gị ohere ịnweta ekwentị efu.
Egwu Project: Ọrụ gụgharia egwuregwu Google bụzi gọọmentị
Mgbapu Ọsọ: Ọrụ gụgharia egwuregwu Google adịlarị adị. Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ ọhụrụ oru ngo n'ihu.
HMD Global na-ekwuwapụta mmemme mwepụta maka Ọktọba 11
HMD Global ekpughere na a ga-ebido ịmalite India na October 11. Mụtakwuo ihe ị ga-atụ anya ya.
Ihe dị ọhụrụ na Google Maps: ịdọ aka na ntị merenụ, ezigbo oge bọs / ụgbọ oloko na njem agwakọtara
Izu a ihe anọ ọhụụ batara na Google Maps: njikwa egwu, ihe mberede okporo ụzọ, ezigbo ụgbọ oloko na ọnọdụ bọs na njem agwakọta.
Google ga-akwụ Apple 9.000 nde afọ a maka ịbụ igwe nyocha ndabara na iOS
Dị ka afọ ọ bụla, ọnụọgụ Google na-akpọ Apple ka ọ bụrụ igwe nchọta ndabara abawanyela nke ukwuu.
Gbalịa OnePlus 6T n'ihu onye ọ bụla ọzọ n'efu
Mụta otu esi enweta usoro nnwale OnePlus 6T a iji nweta ngalaba na-akwụghị ụgwọ n'ụlọ tupu onye ọ bụla ọzọ.
Samsung Galaxy A6s: nkọwa nkọwapụta na TENAA
Samsung Galaxy A6s agbaala na TENAA na ọtụtụ nkọwapụta teknụzụ ya. Chọpụta ihe ụlọ ọrụ kwadebeere anyị.
Nyocha Excelvan BL nyocha
Anyị anwalela Excelvan BL, ihe ngosipụta dị ọtụtụ karịa, ruo nha ihuenyo 200-inch, gam akporo, njikọta dị ukwuu, na okwu ndị ewuru
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde akaụntụ Facebook 50 na-etinye n'ihe ize ndụ n'ihi nsogbu nchebe
Emebi nke nchebe Facebook etinyela ihe dịka nde akaụntụ onye ọrụ 50 n'ihe egwu, ụlọ ọrụ ahụ ekwuola.
ZTE Axon 9 Pro ga-ebido n'etiti October na China
ZTE Axon 9 Pro ga-akụ ahịa ndị China na etiti Ọktoba, dị ka nkwenye na-adịbeghị anya site n'aka otu ụlọ ọrụ ahụ.
A na-emelite Samsung Galaxy Note 9 na mmelite igwefoto dị ukwuu
Samsung Galaxy Note 9 na-anata mmelite ọhụrụ nke na-enye mmelite na ngalaba foto. Chọpụta!
Etu esi eji Microsoft Ntughari Ntughari ngwa ngwa na SwiftKey - mgbakwunye kachasị na ngwa keyboard
SwiftKey na-enye ohere site na ụdị nke ọhụrụ iji onye ntụgharị Microsoft iji mepụta nsụgharị oge niile n'asụsụ ọ bụla.
Nke a bụ ihe Razer ekwentị 2 ga-adị
Ihe oyiyi mbụ nke ihe ga-abụ ọgbọ nke abụọ nke Razer Ekwentị ka abanyela, yana atụmatụ dị ka nke bu ya ụzọ.
LG V40 gosipụtara na Geekbench na-enweghị gam akporo 9.0 achịcha
LG V40 apụtawo na Geekbench Benchmark na ọtụtụ nkọwa ya. Mụtakwuo maka flagship ọzọ nke South Korea.
Oppo Find X ga - abụ ekwentị izizi nwere 10 GB nke RAM
Ahịa ndị China na-akwadebe ịnata ụdị pụrụ iche nke Oppo Find X, ụdị nke ga-abata na 10 GB nke RAM
Vivo na-ekwuwapụta ọgbọ nke anọ nke ndị na-agụ akara mkpisi aka
Vivo ekwuputala ọkwa nke anọ nke ndị na-agụ akara mkpịsị aka na ntanetị na teknụzụ ọhụụ DSP ọhụrụ, site n'aka Qualcomm.
Etu ị ga - esi ahọrọ ebe n’ime otu site na Google Maps ịhazi ihe omume
Ugbu a ị nwere ike ịme atụmatụ na otu ebe ị ga-aga nri abalị ma ọ bụ nri ehihie na ọrụ kpakpando ọhụrụ nke Google Maps. Dị mfe dị ka ịkekọrịta njikọ.
Ndi Apple Watch kacha mma smartwatch na ahịa?
Nanị usoro Apple Watch 4 na-enye obodo kwụụrụ onwe ya nke "elekere" 18, enweghị mgbagha na batrị ya bụ ikiri ụkwụ Achilles
Evan Blass na-akwado nhazi nke Google Pixel 3 na 3 XL na ntụgharị ọhụrụ
Nhazi nke Google Pixel 3 na 3 XL gosipụtara na ọhụụ ọhụrụ nke Evan Blass leaked. Chọpụta ihe ekwentị ndị ọzọ ga - adị ka ya.
Companylọ ọrụ Korea na-edebanye aha patent maka 'Samsung Buds' na Europe
Samsung Buds nwere ike ịbụ ekweisi ikuku na Bixby dịka onye inyeaka onwe. Betszọ nzọ niile nọ na ya.
Kirin 980 karịrị Apple's A12 Bionic, dị ka Huawei si kwuo
Huawei's Kirinj 980 karịrị Apple's A12 Bionic chipset, dị ka ụlọ ọrụ China si kwuo. Mụtakwuo maka nkwupụta akara ngosi a.
Onye OnePlus 6T na-egosi na ezigbo foto ma na-egosipụta atụmatụ ya
Onye OnePlus 6T apụtawo na ezigbo foto, na-ekpughe atụmatụ Waterdrop ya. Chọpụta ihe ọkọlọtọ nke ụlọ ọrụ na-esote ga-adị.
Nsọpụrụ agaghị ekewapụ na Huawei
Site na asịrị sitere na mgbasa ozi dị iche iche na China, a kwadoro na Honor na Huawei ga-aga n'ihu na-etolite otu otu azụmahịa.
Nwere ike idozi Oukitel WP2 naanị euro 190
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ imegharị ekwentị ochie gị n'oge na-adịghị anya ma ị na-achọ ihe nlele na-eguzogide oke ụjọ, ọdịda na mmiri, Oukitel WP2 nwere ike ịbụ ihe nlereanya ị na-achọ.
Leaked ọhụrụ video nke Huawei Nwunye 20
A na - agbapu vidio ohuru nke Huawei Mate 20. Chọpụta atụmatụ ikpeazụ nke njedebe dị elu nke akara ndị China maka vidiyo vidio a.
Ihe ohuru di iche nke Huawei Nova 3i nwere 6 GB nke RAM na 128 GB nke ROM
A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke 6 GB nke RAM na 128 GB nke ohere nchekwa dị n'ime nke Huawei Nova 3i. Ọzọkwa nhọrọ agba ọhụrụ.
Wepu interface igwefoto na akwụkwọ ahụ aja nke Pixel 3 XL
Wepu akwụkwọ ahụaja na interface igwefoto nke Pixel 3 XL. Chọpụta ihe banyere Google ọhụrụ ekwentị ihihi.
Ka anyị nyochaa kpochapụwo Okporo ámá nke Ọnụma 2: a dị ọcha ntụmadị na Axel na ọkụ na gị mobile
Maka onye na-enweghị mmụọ, SEGA Streets of Rage 2 bịarutere iji mezuo ọrụ oke ma weghachite anyị na afọ ndị ọzọ.
Egosiputa Oppo A7 zuru ezu: 6.2 ″ HD + Ngosipụta, SD450 na More
Nkọwapụta teknụzụ nke Oppo A7 agbaala. Mụta ihe banyere ụlọ ọrụ na-esote arụmọrụ obere arụmọrụ.
New Huawei Y9 (2019) nkọwapụta nke TENAA
Huawei Y9 (2019) abanyela na TENAA site na nkọwapụta isi teknụzụ ya. Mara ihe niile banyere ekwentị ọzọ.
Galaxy A9 Pro ga - enwe ese foto anọ
Ihe ntanye nke mbu nke Galaxy A9 Pro bu ihe nzuzu Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ Samsung nke nwere ese foto anọ dị n’azụ.
Gọọmentị India na-ezube igbochi WhatsApp
Enwere ike igbochi WhatsApp kpamkpam na India. Chọpụta ihe banyere nsogbu nke ngwa na mba Eshia nwere ike igbochi ojiji ya.
Geekbench nkọwa dị iche iche nke Realme 2 Pro
Realme 2 Pro agbaala na Geekbench. Mụta maka leaked nkọwa nke ọzọ ọnụ site na ụlọ ọrụ lekwasịrị anya Indian ahịa.
Ihe ngosi nke Nokia 7.1 Plus gosipụtara na vidiyo ma kpughee nkọwa ndị ọzọ banyere imepụta ya
Achọpụtala ụdị 3D nke Nokia 7.1 Plus site na ntinye vidiyo. Mụta maka ngwa ọzọ nke ika ahụ.
Weghaara ọtụtụ nkọwa nke Lenovo Z5 Pro, ọkọlọtọ na-esote ụlọ ọrụ ahụ
Ọtụtụ n'ime teknuzu nkọwa nke Lenovo Z5 Pro e leaked. Mụta ihe niile banyere esote smartphone site na ụlọ ọrụ ahụ.
OnePlus 6 enweela gam akporo 9.0 achịcha n'ụzọ kwụsiri ike
OnePlus 6 na-emeliterịrị gam akporo 9.0 achịcha, ụdị kachasị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google. Anyị na-enye gị nkọwa.
Xiaomi Mi 5s Plus na-anatala gam akporo 8.0 Oreo
Xiaomi Mi 5s Plus na-anata gam akporo 8.0 Oreo ekele maka mmelite ohuru. Mara ihe niile.
WhatsApp na-agbakwunye foto ntanetị na ọkwa gam akporo gam akporo
Ọ ga-abụ site na ngalaba ngosi ebe onyinyo nke ọ bụla kọntaktị ị nwere na WhatsApp zitere ga-agbasa ma daa.
Android akwụgo $ 3 maka ụgwọ maka ịchọpụta chinchi
Android na-akwụ $ 3 nde iji chọpụta ntụpọ nchebe. Chọpụta ihe banyere mmemme ụgwọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Asus ROG Ekwentị ga-abata na Ọktọba
Asus ROG Ekwentị ga-amalite na Europe na njedebe nke Ọktọba. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke ekwentị a na Europe.
Nokia ga-eweta ekwentị ọhụrụ ya n'abalị anọ nke ọnwa Ọktoba
Nokia ga-ewebata ekwentị ọhụrụ ya na Oktoba 4. Chọpụta ihe gbasara ekwentị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ga-eweta n'ihu ọha.
Meizu agaghị ewepụta ekwentị 5G n'afọ ọzọ
Dabere na okwu ndị ọhụrụ nke CEO nke Meizu kwuru, ụlọ ọrụ China agaghị ebupụta ama ama nwere ike ịkwado netwọk 5G n'afọ ọzọ.
Leaked imewe na nkọwa nke Nokia 7.1 Plus
Nokia 7.1 Plus: Leaked Design na nkọwa. Choputa ihe banyere onu ahia ohuru ohuru nke ika a ga adaba n'ahia n'oge na adighi anya.
Nwere ike ịchọta onye otu ma ọ bụ ndị enyi ọhụrụ na Facebook dị ka Tinder
Mkpakọrịta nwoke na nwanyị Facebook bụ ọrụ ọhụrụ nke netwọkụ mmekọrịta iji zute ndị ọhụụ n'obodo gị ma si otú a jikọta ha dịka Tinder.
Leaked nkọwapụta teknụzụ dị iche iche nke LG V40 ThinQ
Leaked nkọwapụta teknụzụ dị iche iche nke LG V40 ThinQ. Chọpụta ihe ụlọ ọrụ South Korea ji ekwentị a kwadebere anyị.
Apple Music ugbu a dakọtara na Android Auto
Ọrụ egwu egwu gụgharia nke Apple, Apple Music, ka emelitere iji kwado Android Auto.
Nokia na arụ ọrụ n’ekwentị
Companylọ ọrụ HMD Global na-arụ ọrụ na smartphone maka ndị na-egwu egwuregwu. Mụtakwuo maka atụmatụ Nokia.
Renault, Nissan na Mitsubishi nakweere gam akporo maka ụgbọ ala ha ma jikọta ngwa Google
N’afọ 2021, a ga-ebuputa ụgbọ ala Renault nke mbụ ga - agụnye gam akporo site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Google Maps, nnyemaaka na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ na ndabara.
Nụbeghị maka Eelo?
Eelo, Gaël Duvan sistemụ arụmọrụ, gosipụtara na sistemụ arụmọrụ gam akporo ga-ekwe omume na-enweghị ọnụnọ Google
A ga-ewepụta Google Home Hub, ọkà okwu nwere ọgụgụ isi na ihuenyo 7-inch na October 9
Nnukwu ọchụchọ ahụ, Google, akwadebelarị ọkà okwu izizi mbụ ya na ihuenyo 7-anụ ọhịa arụnyere, ngwaọrụ nke a ga-ahapụ na October 9
Snapdragon 835 ọ ga-eji Razer ekwentị 2 mee ihe?
Ekwentị 2 Razer ga-eji Snapdragon 835 dị ka ihe nhazi. Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ ọhụrụ ekwentị nke afọ gara aga processor ga-eji.
Ndị na-eme ekwentị n'eweta ego dị elu maka Q2018 XNUMX
Ọmụmụ ihe ọhụụ ekpughere nke bụ ụlọ ọrụ ndị nwetarala ọtụtụ uru na nkeji nke abụọ nke afọ a. Anyị na-enye gị nkọwa niile.
Realme na-agba otu nde igwe ekwe ntị rere na India
Realme ekwuputala na ọ reela otu nde igwe ama ama na India. Onu ogugu a gunyere Realme 1 na 2.
Xiaomi Redmi Rịba ama 6 Pro pụtara na Aliexpress na onyonyo ya, nkọwa ya na ọnụahịa ya
Xiaomi Redmi Rịba ama 6 Pro apụtala na Aliexpress yana usoro ọrụ ya niile. Mara ihe niile banyere ekwentị a.
Mbido nke Nokia 9 ga-egbu oge rue Febụwarị 2019
Mwepụta nke Nokia 9 na-egbu oge ruo afọ 2019. Chọpụta ihe banyere igbu oge nke mmalite nke ụlọ ọrụ dị elu nke ụlọ ọrụ ahụ.
Samsung ga-ekpochapụ nso nso Galaxy J
Samsung ga-ewepụ nso nke Galaxy J. Chọpụta karịa gbasara mgbanwe ndị ụlọ ọrụ Korea ga-ewebata na ekwentị ya.
A ga-ebido Motorola One Power na India na Septemba 24
Motorola ka kwupụtara, site na tweet, na Otu Ike ga-abata India na Septemba 24. Chọpụta.
Ekwentị Honor ohuru na-aga ịmalite ahịa
Edebanyela ekwentị ọhụrụ Honor na nchekwa data TENAA. Mụtakwuo maka nkọwapụta teknụzụ nke akara ekwentị na - esote.
Kwenyesiri ike: OnePlus 6T ga-asị goodbye na 3.5mm Jack audio connector, dị ka ikpe ya si dị
Okwu ikpe na-adịbeghị anya banyere OnePlus 6T na-akwado na njedebe dị elu agaghị enwe njikọ njikọta Jack 3.5 mm.
Nweta ọnụego fiber 200 Mb site na Pepephone na ọnụahịa kacha mma
Pepephone's 200 Mb Fiber Rate dị na ọnụahịa kacha mma. Chọpụta ihe banyere ọnụego a nke nwere mkpuchi Movistar ugbu a.
Xiaomi Redmi Rịba ama 6 Pro na-edozi ọzọ, oge a, na ndepụta nkọwa
Edebanyewo nkọwapụta nke Xiaomi Redmi Rịba ama 6 Pro. Mụta ihe niile banyere ama ọzọ site na ụlọ ọrụ China.
Vivo V11 Pro na-enweta mmelite nke na-enye ya ohere idekọ vidiyo na 4K
Vivo V11 Pro na-enweta mmelite ọhụrụ nke na-enye ya ohere idekọ vidiyo na mkpebi 4K. Anyị na-enye gị nkọwa.
Anyị na-anwale koodu CSS nke na-agbaji iPhones na iPads niile na nke a mere
Xiaomi Mi 8 nwere ihe ntanetị ihe ntanetị ga-abịa n'izu a
Xiaomi ga-ebido Mi 8 na ihe mmetụta mkpịsị aka ihuenyo. Chọpụta ihe banyere ụdị a nke a ga-ewepụta n’ihu n’izu a.
Xiaomi Redmi Rịba ama 6 Pro ga-enwe ese foto anọ
Xiaomi Redmi Rịba ama 6 Pro ga-enwe ese foto anọ. Chọpụta ihe banyere ekwentị Xiaomi ọhụrụ nke na-abịa n'oge adịghị anya.
Galaxy A9 Pro ga - eji Snapdragon 710 dị ka ihe nhazi
Galaxy A9 Pro ga - enwe ihe nhazi Snapdragon 710. Chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara nhazi nke ụlọ ọrụ Korea họọrọ maka ekwentị ọhụrụ ya.
Ọlaọcha Galaxy Note 9 ga-amalite na mba 30
Mba 30 ga-enweta Galaxy Note 9 na ọlaọcha. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke Samsung-elu-ọgwụgwụ na ya ọhụrụ na agba.
The Galaxy S10 ga-enwe dị iche iche a haziri dị ka CEO nke Samsung
Galaxy S10 ga-eweta nhazi dị iche. Chọpụta nkwenye nke CEO nke Samsung na atụmatụ nke ekwentị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Tọrọ logos nke Moto G7 na G7 Plus
Akara logos nke Moto G7 na G7 Plus leaked. Chọpụta ihe banyere akara nke ekwentị ọhụrụ ahụ ruru na-abata na 2019.
WhatsApp na-arụ ọrụ ugbu a na iwebata ọnọdụ gbara ọchịchịrị
WhatsApp ga-ewebata ọchịchịrị mode obere oge. Chọpụta ihe banyere mbata nke ọnọdụ gbara ọchịchịrị na ngwa izipu ama ama.
Ekwentị Huawei ọhụrụ abụọ agbapụla na TENAA
Edebanyela ekwentị abụọ nke Huawei na TENAA. Chọpụta ihe ụlọ ọrụ ndị China kwadebeere anyị.
Meizu 16X ga-eji ihe mmetụta Sony IMX380 na IMX350 ga-abata na teknụzụ ArcSoft
Akwụkwọ ọkwa ọhụrụ nke Meizu 16X na-ekpughe na ọ ga-egosipụta Sony IMX380 na IMX350 sensọ na teknụzụ ArcSoft maka mmelite foto.
Teaser ohuru nke Pixel 3 na-egosi ohere nke ihe nlere na agba mint
Google ewepụtala teaser ọhụụ ka ị nwee ike ịmata agba nke atọ na esemokwu nke Pixel 3: Mint mmiri.
The iPhone XS na-enweta akara dị egwu na Antutu: ọ dị elu karịa nke gam akporo ọ bụla
A na-anwale iPhone XS ọhụrụ na Antutu ma nweta ọkwa dị ịtụnanya. Mụtakwuo maka nsonaazụ nke ekwentị Apple ọhụrụ rụzuru.
Oppo nwere ekwentị ọhụrụ atọ dị njikere maka anyị
Oppo edebanyela ekwentị ọhụrụ atọ na nchekwa data TENAA. Chọpụta ihe ụlọ ọrụ ndị China kwadebeere anyị.
Ndị a bụ ọnụahịa nke iPhone Xs na XS MAX na oroma. Chọpụta ọnụahịa nke ọnụahịa ọhụrụ ekwentị Apple ga-enwe.
Honor View 10 anatala GPU Turbo
Honor View 10 na-enweta mmelite ọhụrụ, nke GPU Turbo technology bịarutere. Muta ihe banyere ihe omuma a.
Samsung Galaxy Note 8 na-enweta mmelite ọhụrụ: ọ na - enweta Super Slow-Motion na AR Emojis
Samsung Galaxy Note 8 na-enweta mmelite ọhụrụ na nkwado maka ndekọ na Super Slow Motion na AR Emojis. Anyị na-enye gị nkọwa.
Moto Mod na kiiboodu maka Moto Z kagburu
Moto Mod na kiiboodu maka Moto Z kagburu. Chọpụta ihe banyere ihe ndị mere e ji kagbuo ọrụ a.
Ekwentị foldable nke Huawei na-abịa na 2019
Huawei ga-ebupụta ekwentị ya nke apị apịtị na ahịa na 2019. Chọpụta ihe banyere mbata nke a mbinye aka ekwentị na ahịa.
PUBG Mobile ruru nde 20 ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike kwa ụbọchị naanị n'ime ọnwa 6
PUBG Mobile na-agbaji ya na nde iri abụọ na-arụ ọrụ kwa ọnwa na egwuregwu mkpanaka dị ugbu a.
Dị kachasị dị elu nke Samsung Galaxy S10 ga-abịa na igwefoto azụ atọ
Ihe omuma ohuru na-egosi na Samsung Galaxy S10 ga abia na uzo ato di iche, otu n’ime ha nwere kamera ato. Mụta ihe banyere eziokwu a kwere omume.
Honor 8X ga-abata na October 11 na Europe
A ga-enye Honor 8X na October 11 na Prague. Chọpụta maka mbata ekwentị Honor na ahịa European n’ọnwa na-abịa.
Meizu 16X ga-eweta na September 19
Official: The Meizu 16X na-aga-ekpughe na September 19. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke ekwentị ọhụrụ a.
Huawei Video, gbakwunyere maka ngwaọrụ Huawei
Huawei Video, nkwanye multimedia ọdịnaya ọrụ na ndenye aha n'efu maka ndị ọrụ ngwaọrụ Huawei, bịarutere Spain
Sọpụrụ iji wepụta ekwentị 5G mbụ ya na 2019
Honor ga-ebido ekwentị mbụ ya na nkwado 5G na 2019. Chọpụta ihe banyere ekwentị mbụ site n'aka ndị na-emepụta China iji nweta 5G.
Nhazi nke ekwentị nwere arụmọrụ kacha mma na ọnụahịa, site n'aka AnTuTu
AnTuTu emeela nyocha nke ejiri ekwentị ndị nwere ọnụego arụmọrụ kacha mma na ahịa dị iche iche, dịka ọnụahịa ha si dị.
Meizu 16X ga-ewepụta echi: nke a bụ ihe niile anyị na-atụ anya site na ekwentị ọhụrụ
Meizu 16X ga-ekwupụta echi. Chọpụta ihe ụlọ ọrụ Asia kwadebeere anyị site na iji ekwentị ọhụrụ a.
Chuwi Hi9 PRO nyochaa vidiyo. Ugbu a na ere maka ihe na-erughị € 120 !!
Akwadoro Vivo Y97 na China
Vivo Y97 ka malitere oru na China. Mụta ihe niile banyere igwe ọhụụ ọhụrụ a na Helio P60 processor si Mediatek.
Huawei Y9 (2019) ka edozichara na TENAA ma gosipụta atụmatụ ya
Huawei Y9 (2019) ka amachara na TENAA, ụlọ ọrụ ndị China. Chọpụta ihe ụlọ ọrụ Asia kwadebeere anyị maka afọ ọzọ.
Ihe nkiri Huawei: Ọrụ nkwanye ahụ rutere Spain
Ihe nkiri Huawei: Ọrụ ọhụụ ọhụrụ nke Huawei. Choputa ihe banyere uzo iyi egwu a nke ngwa ahia ndi China gosiputara.
Agaghị ekpughe ekwentị ekwentị Samsung na November
Samsung agaghị ewebata ekwentị foldable ya na Nọvemba. Onye isi ulo oru a kwadoro na ekwenyeghi ekwenti na 2018.
HTC na-arụ ọrụ na ọkọlọtọ ya na-esote: ọ ga-abụ 5G ma ọ ga-ebu Snapdragon 855
Asịrị na nso nso a na-egosi na HTC, ụlọ ọrụ Taiwanese, na-arụ ọrụ na ekwentị 5G. Mụtakwuo maka ozi a.
Ejikọlarịrị foto na SMS na gam akporo site na mmemme Windows 10 'Insider Preview'
Ihe omume Microsoft App gi na-abia na njedebe ikpeazu nke mmeghari isi nke Windows 10. Mekọrịta foto na SMS.
Samsung Galaxy J5 Prime anatalarị gam akporo 8.0 Oreo
Samsung Galaxy J5 Prime anatalarị gam akporo 8.0 Oreo. Mụtakwuo maka mgbasa nke ụdị sistemụ Google a.
Oppo A7X bụ ọrụ: 6.3-inch FullHD + ihuenyo, Helio P60 SoC na ndị ọzọ
Oppo A7X bụ ọrụ. Mụta maka nkọwa teknụzụ na njirimara nke ama ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ China.
A na-enyocha Moto G7 na ntụgharị na atụmatụ ya gosipụtara [Video]
Emepụtara otu echiche vidiyo nke Moto G7. Ọ na-akọwa nkọwa ya niile nke ga-abụ ezigbo ụzọ maka Moto G6.
Ihuenyo nke Xiaomi Redmi Rịba ama 6 abanyela: 6.18 ″ panel na ọkwa
Ogwe ahụ na onye nchebe na Xiaomi Redmi Rịba ama 6 gaara abanyeworị. Nke a bụ sentimita 6.18 ma nwee ọkwa. Chọpụta!
A gam akporo 9.0 achịcha dakọtara na Sony DualShock 4 na Xbox One gamepad
A gam akporo 9.0 achịcha dakọtara ugbu a na DualShock 4 na Xbox One gamepad. Chọpụta ihe banyere usoro a dị mkpa maka sistemụ arụmọrụ.
Xiaomi Mi 8 Ntorobịa zuru kpamkpam
Wepụtara nhazi na nkọwapụta nke Xiaomi Mi 8 Ntorobịa. Chọpụta ihe gbasara onye ọhụụ batara na ezinụlọ Xiaomi Mi 8.
MediaTek ga - eweta 5G na njedebe dị ala
MediaTek na-arụ ọrụ na iweta 5G na njedebe dị ala. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ụlọ ọrụ ịkwanye teknụzụ a na gam akporo.
Weghara onyinyo ọhụrụ nke Huawei Mate 20 Pro
Ihe onyonyo ohuru ohuru nke Huawei Mate 20 Pro. Chọpụta ihe banyere foto ọhụrụ ahụ nke agbapụgogo nke njedebe nke akara ndị China na-abịa na Ọktọba.
Ndị a bụ ndị iro ise nke WiFi na ị ga-ezere ịnụ ụtọ njikọ dị mma
Anyị na-ekwupụta ọtụtụ "ihe mgbochi" nke ị ga - ezererịrị n'ụgwọ ọ bụla iji nụ ụtọ njikọ Wi-Fi dị mma na enweghị nnyonye anya ọ bụla.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ga-enwe aha ọzọ na mpụga China
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ga-agbanwe aha ya na mpụga China. Chọpụta ihe banyere aha ọhụrụ nke elu-ọgwụgwụ na ahịa ndị ọzọ.
Ihe omuma ohuru ohuru na TENAA: Vivo V1730EA
Vivo dị ka ọ na-akwadebe ọhụụ ọhụrụ na-abịanụ, ebe ngwaọrụ nke ụlọ ọrụ a pụtara na TENAA. Mara ya!
Nka na ụzụ nkọwapụta na leaked nsụgharị nke Oppo A7X, na-esote n'etiti-nso nke ike
Oppo A7X abanyela na sụgharịa yana nkọwapụta teknụzụ ya. Mụtakwuo maka etiti etiti ụlọ ọrụ Eshia ọzọ.
Ekwentị Razer 2 na-agagharị na AnTuTu dị ka njedebe dị elu
Ekwentị 2 Razer na-agafe AnTuTu ma gosipụta ọtụtụ nkọwapụta teknụzụ ya. Chọpụta ihe ụlọ ọrụ na-echere anyị.
HTC na-arụ ọrụ na Qualcomm si Snapdragon 855
Ozi na nso nso a na-egosi na HTC, ụlọ ọrụ Taiwanese, na-anwale Qualcomm Snapdragon 855. Mụtakwuo maka nke a.
Xiaomi bụ onye nke abụọ kachasị na ekwentị na Indonesia
Xiaomi eguzobewo onwe ya dika onye na-eseputa ama ama nke abuo nke nwere oke uzo ahia Indonesia. Chọpụta!
AnTuTu kpughere nkesa ekwentị na ụwa dịka njirimara ha si dị
AnTuTu ka kpughere ọtụtụ data na-agwa anyị otu esi ekesara ekwentị na ụwa dịka njirimara ha si dị.
Wepụtara nkọwa ndị mbụ nke Razer Ekwentị 2
Nkọwapụta izizi nke Razer Ekwentị 2 bụ leaked.Chọtakwuo maka nkọwa izizi nke ama egwuregwu ọhụụ.
Ihe omimi Xiaomi M1808D2TE na - ejeghari na TENAA. Ọ ga-abụ Mi 8 Ntorobịa?
A Xiaomi nwere koodu "M1808D2TE" ka TENAA kwadoro. Ihe niile na-egosi na ọ nwere ike ịbụ Xiaomi Mi 8 Ntorobịa.
Enwetara Meizu 16X na AuTuTu dị ka oke etiti
Meizu 16X gara n'ihu AnTuTu ọzọ,. Na nzacha ọhụrụ a, ekpughere nsonaazụ nke ọnụ ya nwetara. Mara ya!
Ntughari ohuru nke Nokia 9 na-ekpughe ihuenyo na notch
Nokia 9 apụtala na ngosipụta gosipụtara ihu na azụ nke ngwaọrụ a, ya na nhazi ihe ịtụnanya nke igwe foto ise.
Samsung ịmalite ụdị nke Galaxy S10 na 5G
Samsung na-arụ ọrụ na Galaxy S10 na nkwado 5G. Chọpụta ihe banyere ụdị nke a dị elu nke ụlọ ọrụ ahụ ga-ebupụta na ahịa.
Leaked ọhụrụ oyiyi nke Nokia 9
Ihe onyonyo ohuru nke igwe foto ise nke Nokia 9 gbara. Chọpụta karịa maka akara ọhụrụ dị elu na akara igwefoto ya ise.
A ga-enye Google Pixel 3 na October 9 na New York
Google ga ewebata Google Pixel 3 na October 9 na New York. Chọpụta ihe banyere mmemme ngosi ekwentị ọhụrụ.
Ejiri ọtụtụ isi atụmatụ nke Xiaomi Mi 8 Ntorobịa
Ndenye ọhụụ mere ka ekpughere usoro nkọwapụta isi nke Xiaomi Mi 8 Ntorobịa. Mara ihe Xiaomi kwadebere maka anyị.
Gọọmentị China na-achọ igbochi ihe riri ahụ egwuregwu vidio
Gọọmentị China na-etinye usoro iji kwụsị mkpa dị oke mkpa nke ndị na-azụ ahịa maka egwuregwu vidio. Mụtakwuo maka atụmatụ a.
Moto P30 Play gwuru kpamkpam na Motorola website
Emechara Moto P30 Play na Motorola website. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ nke ga-ada n'ahịa n'oge na-adịghị anya.
Amazon na-ewepụta mbadamba ohuru nke Fire HD 8, ọgbọ ọhụrụ nke ngwaahịa na-ere dị ka donuts
Amazon ka ulo oru ohuru Fire HD 8. Mbadamba ụrọ nke ruru ụdị akpa niile ka enwere ike zụta ya euro 99.
Sọpụrụ Band 4, AMOLED ihuenyo na-aga n'ihu obi ọnụego nlekota
Anyị na-agwa gị ihe niile gbasara Honor Band 4, otu egwu mara mma nke na-enyocha obi gị ruo ụbọchị isii na-enweghị nkwụsị.
Samsung mbu nke nwere ihe nkpisi nkpisi aka ya gha abia n’onwa iri
Samsungdị Samsung mbụ nwere akara mkpisiaka ga-abata na Ọktọba. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke a mbinye aka ekwentị.
Jupụtara na nkume igwe na-eme ka ọ gam akporo Enterprise Na-atụ aro
Gam akporo Enterprise na-atụ aro usoro ihe omume na-ewebata jupụtara na nkume mobiles. Chọpụta ihe banyere ekwentị ndị na-abịakwute mmemme azụmahịa.
Foto izizi nke Nokia 9 nyere anyị ohere ihu igwe ese foto ya ise
Anyị nwere ike ịhụ igwefoto ise nke Nokia 9 maka oge mbụ. Choputa ihe banyere imeputa ohuru ohuru ohuru nke n’abia n’oge na adighi anya.
Samsung ekwentị foldable ga-enwe ihu abụọ
Samsung ekwentị foldable ga-egosipụta ihu abụọ. Chọpụta ihe banyere ekwentị mpịachi site na ụlọ ọrụ Korea nke rutere na Nọvemba.
Razer kwadoro na ọ na-arụ ọrụ na ọgbọ nke abụọ nke ekwentị Razer
Izu ole na ole gara aga, anyị kwughachiri asịrị nke a na-ekwu na ụlọ ọrụ Razer, nwere ike iweta ọgbọ nke abụọ nke Razer Ekwentị tupu onye mepụtara ngwa egwuregwu, egosila na ọ na-arụ ọrụ na ọgbọ nke abụọ nke Razer Phone.
WhatsApp beta na-enye nsogbu ndetu olu na mbipute 2.18.271
WhatsApp beta mbipute 2.18.271 anaghị ekwe ka ịkpọọ olu memos. Ha na-emechi ngwa ahụ mgbe ha na-achọ ịmị ha ka ọ tụrụ ọtụtụ ndị n’anya.
Instagram na-emepe ngwa na-enweghị atụ maka ịzụrụ: IG Shopping
Shozụ ahịa IG ga-abụ naanị ngwa Instagram etinyere n'ịzụ ahịa. Nwere ike ịzụta ugbu a na ụlọ ahịa kachasị amasị gị.
Otutu ihe omuma nke LG Q9 agbaala
Achọpụtala atụmatụ dị iche iche na nkọwapụta nke LG Q9. Mụtakwuo banyere ngwaọrụ a nke a ga-ewepụta n'oge na-adịghị anya.
Sony kwụgidere Xperia XZ3 na 6 GB nke Ram na ibe ya na Taiwan
Sony ekpughela na Xperia XZ3 nke Taiwan na-abịa na 6GB nke ikike RAM. Mụtakwuo banyere akụkọ a na-adịbeghị anya
Ekwentị 10 kachasị ike nke August 2018, Dabere na AnTuTu Benchmark
AnTuTu na-ewetara anyị ọkwa nke 10 nke smartphones kachasị ike nke ọnwa nke Ọgọstụ nke afọ a, nke Xiaomi Black Shark na ndị ọzọ nọ.
Ọrụ Amazon Prime ga-agbago 80%
Amazon na-ewelite ọnụahịa nke ndenye aha Prime ya site na 80% ruo € 36 kwa afọ, ọ ka bụ ọrụ na-adọrọ mmasị na ọnụahịa dị mma?
Ekwentị mkpanaka Samsung ga-ekpughere na November
Samsung ga-ewebata ekwentị foldable ya na Nọvemba. Choputa ihe banyere mbata nke ekwenti Korea nke afọ a.
Samsung ọ ga - ewepụta ekwentị nwere kamera azụ anọ?
Samsung nwere ike ịmalite ekwentị nwere ese foto azụ anọ. Chọpụta ihe banyere ekwentị ae chere na akara Korea.
The Honor 7S ga-ebido echi na India na ọnụ ala dị ọnụ ala
The Honor 7S ga-ebido echi na India na ego dị ọnụ ala. Mụtakwuo maka ngwa ekwupụtaghị na arụmọrụ nke ọma.
POPTEL P9000 MAX Nyocha
Anyị nwalere rugoro POPTEL P9000 MAX, ama nwere asambodo IP68, batrị 9000 mAh yana arụmọrụ dị oke mkpa ịtụle
Twobọchị abụọ ka ịmalite ya, Honor 8X na-agbapụ na TENAA
Honor 8X ka batara na TENAA, ụlọ ọrụ ndị China, ọzọ. Mụtakwuo maka ihe ekpughere banyere ngwaọrụ a.
Google Pixel dị ọnụ ala ga-ebupụta na India
Google ga-ebido Pixel dị ọnụ ala na ahịa dịka India. Chọpụta karịa maka mwepụta nke Pixel a dị ọnụ ala nke ga-abata na Ọktọba.
Xiaomi na-ekpughe na ihe oyiyi Mi MIX 3 na njikọ 5G na ihe ijuanya onye ọ bụla
Ọ bụrụ na netwọkụ 4G amachaghị gị, ọ bụrụ na ịzụta Xiaomi Mi MIX 3 mgbe ọ dị n'ahịa, ịnwere ike iji 5G gbapụ ọsọ.
Nubia Red Magic 2 ga-abata na Snapdragon 845 na bọtịnụ dị n'akụkụ nkuku
Nubia Red Magic 2 ga-abịa na Qualcomm Snapdragon 845 SoC yana bọtịnụ n'ubu. Mụtakwuo banyere ọhụụ a ekpughere n'oge na-adịbeghị anya.
Jiri ohere ịlaghachi azụ na ụlọ akwụkwọ dị na Amazon
Amazon: Laa azụ ego n’ụlọ akwụkwọ na ekwentị na mbadamba. Chọpụta ngwaahịa ndị dị na nkwalite na ụlọ ahịa n'oge ịlaghachi n'ụlọ akwụkwọ
Samsung na-enye mpempe akwụkwọ mpịachi na Xiaomi na OPPO
Xiaomi na OPPO na-enweta ihu igwe site na Samsung. Choputa ihe banyere mmekorita nke ulo oru abuo a.
Onwere onye hapụrụ Pixel 3 Xl echefuru n'ime ụgbọ ala
Otu onye chefuru Google Pixel 3 XL ha n'ime ụgbọ ala. Chọpụta ihe banyere akụkọ a nke anyị ji mara usoro ekwentị.
Meizu M8 gafere TENAA ma kpughee atụmatụ ya
Meizu M8 jiri ihuenyo 5.7-inch HD + kụrụ TENAA na octa-core processor 2.0 GHz. Anyị na-agbasawanye gị.
LG V40 nkọwa leaked
Edebanyelarị nkọwa nke LG V40. Chọpụta ihe banyere nkọwa nke ika ọhụrụ elu-ọgwụgwụ, ugbua leaked.
Ndi ohuru ohuru ha yiri?
Don't cheghị na smartphones ọhụrụ niile yitere oke? Ọkwa, igwefoto abụọ ... Ọ bụghị oge ụfọdụ ụlọ ọrụ nwere ihe ize ndụ nke ịmepụta ihe dị iche?
ZTE ekwentị 5G izizi ga-amalite na ngwụcha 2019
ZTE ga-ebido ekwentị 5G mbụ ya na njedebe nke 2019. Chọpụta ihe banyere igbu oge na mwepụta nke ihe nlere a site n'aka ndị nrụpụta.
Lenovo ẹkedori a retractable igwefoto ekwentị
Lenovo na-arụ ọrụ na igwefoto igwefoto. Chọpụta echiche nke ekwentị a nke Lenovo na-arụ ọrụ ugbu a.
OnePlus ga-emeghe ụlọ ahịa mbụ ya na Paris
OnePlus ga-emeghe ụlọ ahịa mbụ ya na Europe na Paris. Chọpụta ihe banyere ụlọ ahịa nke akara ndị China na isi obodo French.
Sharp kpughere ekwentị atọ maka nlọghachi ya na Europe
Sharp na-eweta ekwentị ọhụrụ ya atọ maka Europe. Chọpụta ekwentị ndị ọhụrụ nke akara ndị Japan ga-ebupụta na Europe.
Onye ọrụ: Huawei ga-eweta Mate 20 na October 16 na London
Huawei ka kwupụtara na aga-ekpughe Mate 20 na Mate 20 Pro na October 16 na London. Chọpụta ihe ụlọ ọrụ kwadebeere anyị.
Nyochaa akpa azu Mbuynow, USB na ọdụ ụgbọ mmiri
Zute Mbuynow azu paaki, akpa nke oge a na-ebu laptọọpụ gị, nwee ike ịnweta ekwentị gị yana nke ị nwere ike ijikọ ekweisi gị.
Ekwentị abụọ ọzọ sitere na akara French: Wiko View 2 Plus na Wiko Harry 2
Daybọchị ọma maka akara ekwentị French Android na ngosi na IFA nke Wiko Harry 2 na Wiko View 2 Plus.
Vivo X23 na-asọba na AnTuTu na Snapdragon 670
Vivo X23 ka gafere AnTuTu na noas ekpughela atụmatụ ya. Mụtakwuo maka ngwaọrụ a n'etiti.
Apple ga-eweta ọgbọ ọhụrụ nke iPhone na Apple Watch na Septemba 12
Mgbe ọtụtụ ụbọchị nke asịrị na ịkọ nkọ, ụlọ ọrụ ndị Cupertino ka zipụrụ ọkpụkpọ òkù na mgbasa ozi nke ọ ga - abụ na Septemba 12, Apple ga-eweta ọgbọ ọhụrụ nke iPhone yana ogologo oge echere nke imewe Apple Watch.
Enweghị ike ịkpọ Netflix HD vidiyo na Pocophone F1
Pocophone F1 enweghị ike igwu vidiyo HD na Netflix. Chọpụta ihe banyere akụkọ a nke ekpughere n'ime awa ole na ole gara aga.
Wiko View 2 Go: Mpaghara ntinye na notch na batrị 4.000 mAh
Wiko View 2 Go: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite. Chọpụta ihe maka akara ngosi ọhụụ ọhụrụ emere na IFA 2018.
Ihe onyonyo mbu nke Xiaomi Mi Mix 3 di ebe a
E gosipụtara ihe osise mbụ nke Xiaomi Mi Mix 3. Chọpụta ihe banyere nhazi nke ọhụụ ọhụrụ nke akara ngosi China nke rutere n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Download ngwa nke POCO Launcher ugbu a, onye na-ebupụta ngwa nke na-atọ ụtọ dị ka "obere"
Enweghi ike ikwu ntakịrị ihe banyere POCO Launcher, Pocophone F1 ngwa ngwa bidoro taa na India. Dabere na nhọrọ.
Ahịa na nnweta nke Honor Play na Spain
Honor ekwuputala ọnụahịa na nnweta Honor Play maka Spain. Mụtakwuo banyere akụkọ a ekpughere n'oge na-adịbeghị anya.
Vivo X23 ga-akụ ụlọ ahịa na agba atọ dị iche iche. Chọpụta ihe banyere agba ekwentị ga-amalite na.
A na-ekpughere Vivo V11 Pro na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ tupu ya amalite
Vivo V11 Pro ka ekpughere na weebụsaịtị ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ tupu ya amalite, nke edobere na Septemba 6.
A kwadoro Huawei dị ka onye nrụpụta nke abụọ nke smartphones zuru ụwa ọnụ
Na mbido Ọgọstụ, Apple na Huawei gosipụtara ọnụ ọgụgụ ndị ahịa ha na-ere maka nkeji nke abụọ ...
OUKITEL K8 nyocha
Anyị nwalere OUKITEL K8, smartphone dị ọnụ ala yana onyo anụ ọhịa 6-inch na igwefoto abụọ nwere oke atụmatụ maka ihe na-erughị € 150. Ọ bara uru?
Samsung na-arụ ọrụ ugbu a na mmelite Galaxy S9 na gam akporo
Ọ dịbeghị mgbe ụlọ ọrụ Korea mara maka ịbụ otu n'ime ndị nrụpụta izizi iji melite njedebe ya ngwa ngwa na ụdị ndị ọhụrụ nke Ọ dị ka ụlọ ọrụ Korea Samsung chọrọ imelite ngwaọrụ ya na Android Pie ozugbo enwere ike, ma ọ bụ opekata mpe ihe Galaxy S9.
HTC U12 Life leaks na Geekbench na a Snapdragon 636 SoC
HTC U12 Life gafere Geekbench na SD636. Mụtakwuo banyere data ekpughere nke etiti ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
A tọhapụrụ Smartisan Nut Pro 2S: ihuenyo 6.01-inch, Snapdragon 710 na ndị ọzọ
Smartisan Nut Pro 2S bụ onye ọrụ gọọmentị na China. Mụta ihe niile banyere etiti ọhụrụ a na Qualcomm si Snapdragon 710 processor.
Weghara onyinyo mbụ nke osise nke Honor 8X Max
Ihe osise mbụ nke Honor 8X Max bụ ebe a. Chọpụta ihe banyere imewe nke ọhụrụ Chinese ika ekwentị.
Oppo nwere ihe nlere na ntanetị 5G na Oppo R15 gbanwere na modem X50
Oppo ka gbara 5G ule na Oppo R15 ekwentị gbanwere modem Qualcomm X50. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
Sony iji gosipụta ekwentị dị iche iche na IFA 2018
Sony ga-eweta ọtụtụ ekwentị na IFA 2018. Chọpụta ihe banyere ọkwa nke ụlọ ọrụ Japan nke ga-anọ na IFA.
ZTE ga-eweta Nubia Z18 nke a na-esote Septemba 5
Nubia Z18 ga - eweta nke a na - esote Septemba 5, ikekwe na IFA na Berlin, Germany. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
The Realme 2 bụ nke gọọmentị: atụmatụ na ọnụahịa nke etiti ọhụụ ọhụrụ
Emepela Realme 2 na India site na Snapdragon 450 SoC. Mụta ihe niile gbasara igwe ọhụụ ọhụrụ a na ụlọ ọrụ.
Ndị ọrụ Huawei nwere omenala ROM manyere ịlaghachi na gọọmentị ROM
Huawei na-amanye ndị ọrụ nwere omenala ROM ịlaghachi na nke mbụ. Chọpụta ihe banyere nsogbu onye ọrụ na akara ndị China.
TSMC ịmalite mmepụta nke Qualcomm's Snapdragon 855 na-esote nkeji
Central News Agency nke Taiwan ekwenyela na onye nọchiri SD845, Snapdragon 855, ga-ebido mmepụta na nkeji iri na ise ikpeazụ.
A ga-enye Google Pixel 3 na October 9
A ga-enye Google Pixel 3 na October 9. Chọpụta karịa maka ụbọchị ntọhapụ nke ekwentị Google ọhụrụ.
Nwere ike idozi Oppo Find X na Spain
Oppo Find X dị ugbua dị ka ndoputa na ụlọ ahịa atọ dị n'ịntanetị na Spain: Media Markt, FNAC na El Corte Inglés.
Huawei Mate 20 Lite ugbu a n'ahịa: nkọwapụta teknụzụ na ọnụahịa
A na-ere Huawei Mate 20 Lite na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke sitere na Polish. Mara nkọwa ya na ọnụahịa ya!
Ndị ọrụ gọọmentị Facebook na-akwado ọwa ngosi ngosi gam akporo
Site na ụdị gam akporo 8.0 Oreo ị nwere ike iji ọwa ngosi na ngwa Facebook. Mbata niile maka netwọkụ mmekọrịta.
Galaxy S10 ga-enwe ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na ihuenyo ahụ
Galaxy S10 atọ ahụ ga-enwe ihe mmetụta mkpịsị aka ihuenyo. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nkịtị nke Samsung ọhụrụ elu-ọgwụgwụ.
AGM X3 gafere TENAA: e gosipụtara atụmatụ na nkọwapụta
AGM X3 dị na TENAA tinyere onyonyo ya na nkọwapụta teknụzụ. Mụta ihe niile banyere nke a ọzọ jupụtara na nkume smartphone.
Nhazi nke LG V40 gbara na vidiyo
Leaked na video nhazi nke LG V40. Chọpụta ihe banyere nhazi nke ọhụụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Korea nke ga-abata n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Wepụtara nkọwa ndị mbụ nke Honor 8X Max
Honor 8X Max: Nkọwapụta mbụ leaked. Chọpụta ihe banyere etiti ọhụrụ nke akara ndị China nke a ga-ewepụta na Septemba.
Vodafone Smart N9 Lite: ihe gam akporo 8.1 Go mobile na ọnụahịa dị oke ọnụ
Vodafone ka malitere Smart N9 Lite na Spain. Chọpụta nkọwa niile gbasara ekwentị ọhụrụ a nwere gam akporo 8.1 Go!
Motorola Otu Ike kpamkpam agbapụla
Nzacha nkọwa zuru ezu nke Motorola One Power. Chọpụta ihe niile banyere ekwentị mbụ Motorola na gam akporo Otu.
Threebọchị atọ ka ebidochara ya, akọwapụla nkọwa teknụzụ nke Realme 2
Oge Realme ọzọ, Realme 2, agbaala kpamkpam. Mara njirimara ya na teknụzụ ya!
Thunderdogs bụ egwuregwu ".io" nke nwere oke ụgbọ elu na ọtụtụ egwuregwu
Thunderdogs bụ egwuregwu ịsọ mpi n'ịntanetị nke ị ga-eche ihu maka ndị egwuregwu ndị ọzọ na-anya ụgbọ elu ndị agha ha.
Geekbench kwadoro ọtụtụ atụmatụ nke ZTE Axon 9 Pro
Fọdụ nkọwapụta nkọwapụta nke ZTE Axon 9 Pro, dịka onye nhazi na RAM, ka ekpughere Geekbench. Mara ha niile!
Australia vetoes Huawei na ZTE site na mmepe nke netwọk 5G na mba ahụ
Gọọmentị Australia na-amachibido Huawei na ZTE itinye aka na mmepe 5G nke mba ahụ. Mara ihe niile gbasara mgbochi a.
Oppo na-arụ ọrụ na ekwentị 5G mbụ ya
Oppo na-arụ ọrụ na ama 5G mbụ ya. Mara ihe omuma banyere ulo oru a.
Shaq Fu: Otu akụkọ banyere ịlọ ụwa ọzọ na-etinye gị ka kpakpando NBA a la "Double Dragon"
Shaq Fu: Akụkọ banyere Akụkọ Ochie na-etinye gị n'ihu egwuregwu egwuregwu mara mma iji chetara gị ihe nketa nke dragon abụọ hapụrụ.
A ga-enye Realme 2 na August 28
Realme 2 ga-abata India maka ego dị ọnụ ala na August 28. Chọpụta ihe niile gbasara ntọhapụ na-abịanụ!
Igwefoto 5, ọ bụghị ma ọ bụ obere, ndị na-egosi na mbido mbụ nke LG V40
A ga-egosiputa LG V40 na Nọvemba ma ugbu a ọ bụzi onyonyo izizi nke na-enye ọkụ na ọnụọgụ igwefoto: naanị 5.
Ihe ngosi nke Honor 8X na 8X Max kwadoro na September 5 na-esote
Honor ka kpughere ụbọchị ngosi nke Honor 8X na 8X Max. Ọ ga-abụ na Septemba 5. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
HTC U12 + malitere inwe mmelite ọhụrụ na ọtụtụ ndozi na CryptoKitties
HTC U12 Plus na-enweta mmelite ọhụrụ na ọtụtụ ndozi na ngalaba kwụụrụ onwe ya na ngalaba arụmọrụ niile. Na mgbakwunye, ọ na-abịa na CryptoKitties!
Enweghi ike imechi bọtịnụ Bixby na 9 Galaxy Note
Nweghị ike iwepu bọtịnụ Bixby na Galaxy Note 9. Chọpụta ihe banyere mkpebi a Samsung na-ese okwu.
Mmepụta nke Snapdragon 855 ga-amalite na nkeji nke anọ nke afọ
Snapdragon 855 ga-ebido mmepụta na nkeji iri na ise nke afọ 2018. Chọpụta karịa maka nhazi processor nke Qualcomm.
Nkwupụta ọhụụ nke Huawei gosipụtara na Kirin 980 ga-ekpughere na August 31
Huawei ga-egosi HiSilicon Kirin 980 na IFA na Berlin, Germany na 31 Ọgọstụ. Chọpụta ihe ụlọ ọrụ ahụ na-echere anyị!
Wiko Sunny3 na Sunny3 Mini: Njedebe dị ala na gam akporo Go
Wiko Sunny3 na Sunny3 Mini: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta. Chọpụta ihe banyere njedebe ala a na gam akporo Go dị ka sistemụ arụmọrụ.
OPPO R17 Pro: Akara ọhụrụ nke ika ahụ
OPPO R17 Pro: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị. Choputa ihe banyere ekwenti ohuru site na ngwa ahia ndi China webatara taa.
HTC kwupụtara mwepụta maka August 30 ọzọ. Ọ ga - abụ U12 Life?
HTC ka kwupụtara ọkwa maka August 30 ọzọ. O nwere ike ịbụ HTC U12 Life. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
Doogee S70: ekwentị mbụ jupụtara na nkume na-egwu egwu na ahịa bụ ọrụ
Doogee S70 adịworị gọọmentị ma ọ na-abịa na atụmatụ na nkọwa dị oke mma. Mụọ ihe niile gbasara igwe eji egwu egwu na ụwa.
Ihe nkowa banyere Google Pixel 3 XL nke Google: emezighari ngwa igwefoto na ekweisi ikuku na Google Assistant
Google Pixel 3 XL na-eru nso ma ugbu a anyị maara nkọwa ndị ọzọ gbasara ekweisi ya na ngwa igwefoto emezigharị.
Motorola RAZR: Nke a ga-abụ ekwentị mpịachi akara ngosi ahụ
Chọpụta karịa maka ekwentị folda ọhụrụ Motorola, nke na-abịa n'okpuru aha RAZR. Ekwentị foldable nwere ụdị ochie.
A ga-amalite LG V40 na ahịa na Ọktọba
LG V40 ga-ebido na South Korea na Ọktọba. Choputa ihe banyere ohuru ohuru nke ulo oru Korea nke gha abia n’oge mgbụsị akwụkwọ.
Xiaomi rere nde ekwentị 32 na nkeji nke abụọ
Xiaomi eresịla 32 nde ekwentị na nkeji nke abụọ. Chọpụta karịa maka ire ere ekwentị ndị China na nkeji nke abụọ.
ZTE Axon 9 Pro nhazi ikpeazụ ekpughere
Ekpughela atụmatụ ikpeazụ nke ZTE Axon 9 Pro. Chọpụta atụmatụ ga-enwe ekwentị ọhụrụ nke akara ndị China na-abịa n'ọnwa a.
Nkwupụta ọkwa mbụ nke Vivo X23 bụ ebe a
Egosipụta ọkwa ọkwa mbụ nke Vivo X23. Chọpụta karịa gbasara ọkwa izizi nke ekwentị akara ọhụụ ọhụụ.
Wepu ihe oyiyi mbụ nke LG V40
LG V40: Igwefoto atọ na azụ na ọkwa mbụ ya. Chọpụta atụmatụ nke LG ọhụrụ dị elu na-abịa n'oge adịghị anya.
Foto izizi emere na Google Pixel 3 XL biara
Otutu foto esere na Pixel 3 XL agbaala ka egosiputa ogo nke ekwentị Google ọhụụ.
Nzacha mbụ oyiyi nke Nokia X7
Ihe onyonyo izizi nke Nokia X7 agbaala. Chọpụta ihe gbasara ekwentị ọhụrụ ahụ na ụlọ ọrụ izizi nke oyiyi mbụ ya abanyela.
Samsung na-arụ ọrụ na smartphones ọhụrụ ise maka Europe
Samsung na-emepe ekwentị ise maka Europe. Chọpụta ihe gbasara ụlọ ọrụ na-abịa n'ihu na Europe.
Huawei ga-ewetara EMUI 9.0 dabere na A gam akporo na IFA 2018
EMUI 9.0 nke dabere na gam akporo Pie ga - ewepụta ya na IFA 2018. Chọpụta karịa maka ụdị ọhụụ nke Huawei na-edozi oyi akwa.
Meizu 16X na-aga site na AnTuTu ma gosiputa isi ihe ya
Meizu 16X na-aga site na AnTuTu ma gosipụta àgwà ya dị mkpa. Chọpụta ihe ụlọ ọrụ na-echere anyị.
Nokia 6.1 Plus na Nokia 5.1 Plus: Ọkara ọhụrụ nke ika ahụ
Nokia 6.1 Plus na 5.1 Plus: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ etiti abụọ dị na Nokia.
Ọhụrụ Google Fit melite chọrọ ka ị pụọ ịnyịnya ibu gị n'ihe ndina ma malite ije ije ọ dịkarịa ala kwa ụbọchị. Ihe niile iji mee ka ahụike gị ka mma.
Na-esote na Instagram: ederede olu na ozi ederede
Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke netwọkụ mmekọrịta a, ị maraworị na mmelite ga-abịa n'oge na-adịghị anya nke ga-enye gị ohere iji ndetu olu na ozi ozugbo na Instagram.
360 N7 Pro na Lite bụ ọrụ: atụmatụ na ọnụahịa nke ụzọ ọhụrụ a
360 wepụtara N7 Pro na Lite. Mụta maka njirimara na njirimara teknụzụ nke akara igwe ọhụụ ọhụrụ a.
Tronsmart Element Pixie blu Bluetooth ọkà okwu nyocha
Anyị anwalewo Tronsmart Element Pixie, ọkà okwu bluetooth nke na-enye atụmatụ imụrụ ihe, ọtụtụ nnwere onwe na ike dị ukwuu.
Pepephone's fiber na-enye gị okpukpu abụọ Mb
Pepephone na-enye gị megabytes abụọ na fiber optics maka euro 29. Chọpụta karịa banyere mgbanwe nke onye ọrụ ga-ewebata na eriri ya,
Caviar Samsung Galaxy Note 9 na-abịa na 1 n'arọ nke ọla edo ma na-efu ihe ruru euro 50.000
Caviar akwadebewo 9 Samsung Galaxy Note na kilogram ọla edo na azụ ya na ego 50.000. Chọpụta!
Huawei Mate 20 ga-enwe kamera azụ atọ
Huawei Mate 20 ga-enwe kamera okpukpu atọ. Chọpụta ihe banyere njedebe dị elu nke ika China nke na-abịarute n'oge mgbụsị akwụkwọ.
Ihe oyiyi ọhụrụ nke Vivo X23
Egosiputa nkpuru ikpeazu nke Vivo X23 na notch na igwefoto abuo. Chọpụta ihe gbasara ekwentị ọhụrụ site na akara ndị China na-abịa n'oge adịghị anya.
Ekwentị, mbadamba nkume ma ọ bụ phablet? Sọpụrụ na-akwado 8X, ngwaọrụ nwere nnukwu ihuenyo
Honor ka kwuputara ịdị adị nke Honor 8X, akara ngosi na - esote ya na nnukwu ihuenyo. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
Xiaomi Pocophone F1 na-agafe Geekbench ọzọ, oge a na 8GB nke RAM
Xiaomi Pocophone F1 na-agafe Geekbench na 8GB nke RAM. Chọpụta karịa gbasara ọhụụ benchmark ọhụrụ a!
Kwadoro: ZTE ga-eweta Axon 9 nke a na-esote August 30
ZTE ka kpughere akwụkwọ na-ekwupụta mwepụta nke Axon 9, onye nọchiri Axon 7. Chọpụta ihe ụlọ ọrụ ahụ na-echere anyị!
PUBG Mobile Oge XNUMX bidoro na Wednesde
Jikere ịnata igbe ndị ahụ ị nwetara na Wednesde a na mmalite nke oge ọhụrụ na PUBG Mobile.
Bipụtara foto mbu were Nokia 9
Foto izizi nke igwefoto Nokia 9 nọ ebe a. Chọpụta karịa gbasara foto ndị a were igwefoto dị elu.
Filters ọhụrụ nsụgharị nke Xiaomi Mi MIX 3
Filters ọhụrụ sụgharịrị na Xiaomi Mi MIX 3. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke ọhụrụ elu-ọgwụgwụ nke Chinese ika ga-abata na ọnwa ole na ole.
A ga-ere Huawei Nova 3 na 3i na agba Iris Purple na India site na izu na-abịa
Huawei Nova 3 na Nova 3i ga-adị na acha odo odo malite izu na-esote na India. Chọpụta!
Huawei P20 Pro ga-ewebata agba ọhụrụ abụọ na IFA 2018
Huawei P20 Pro ga-agbakwunye agba abụọ ọhụrụ na nso na IFA 2018. Chọpụta ihe banyere ụdị ọhụrụ nke njedebe dị elu nke akara ngosi China
Huawei Mate 20 Lite ga-eji Kirin 710 rụọ ọrụ
Huawei Mate 20 Lite ga-ebu Kirin 710 processor. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ ahụ n'aka ndị na-emepụta China, nkọwa ha na-abịakwute anyị.
Vivo iji malite Vivo V11 na Septemba 6 na India
Vivo na-akwado ibido Vivo V11, ngwụcha ngwụcha dị elu, na India na Septemba 6. Chọpụta!
ZTE nwere ike iweta Axon 9 na IFA 2019
ZTE na-aga iweta akara ngosi Acon 9 na IFA 2018. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ ga-eweta.
Ahịa ụlọ Google na-eto 449% na nkeji nke abụọ nke afọ
Google Home sales na-etolite ma na-eti Amazon na ahịa. Choputa ihe banyere onu ahia onu ahia Google.
Onye Motorola Otu gafere TENAA ma kpughee atụmatụ ya na atụmatụ ya
Onye Motorola Otu gara njem TENAA. Chọpụta imewe na niile atụmatụ na teknuzu nkọwa kpughere a ekwentị!
MediaTek na-arụ ọrụ na Helio P80 na P90
MediaTek na-arụ ọrụ na nhazi abụọ iji nwee ike ịga nke ọma Helio P60. Chọpụta ihe banyere ndị nrụpụta ọhụụ nke akara ngosi China.
Onye OnePlus 6T ga - abata na Ọktọba na ịrị elu ọnụego
A ga-ebido OnePlus 6T na Ọktọba yana mmụba ọnụahịa gụnyere. Chọpụta ihe banyere ọhụụ ọhụrụ dị elu nke akara ndị China.
Google na aru oru na enyemaka nke ihe mgboro osonye na android
Google gosiputara nkwado maka ihe ngwanrọ nke gam akporo dakọtara. Chọpụta ihe banyere sistemụ ọhụrụ a nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara.
Sony na-ekpughe ụbọchị nke ekwentị ya ga-enweta gam akporo 9.0 achịcha
Sony na-ekpughe ndepụta na ụbọchị nke ekwentị ndị ga-enweta gam akporo 9.0 Pie. Mara ngwaọrụ ndị ga-enwe ọ OSụ OS ọhụrụ a!
Motorola Otu leaked atụmatụ: OS, Ram, na processor ọsọ ekpughere
Motorola One ka pụtara na Geekbench n'akụkụ ụfọdụ ụdị nkọwapụta ya. Mara ihe igwe a ga - abia!
Sony Xperia XA3 Plus gosipụtara na Geekbench: nkọwapụta igodo gosipụtara
Sony Xperia XA3 Plus dị na Geekbench Benchmark. Chọpụta ihe Sony nwere maka ekwentị ọzọ!
Google na akwado iji mepee ulo ahia nke izizi
Google nwere ike ịmalite ụlọ ahịa nke mbụ ya iji ree ngwaahịa ya niile, lee nkọwa nke asịrị a
Huawei's Kirin 980 agaghị enwe cores Cortex-A77, mana Cortex-A76 nke ARM
Huawei onye nhazi ozo, HiSilicon Kirin 980, agaghi enwe nkpuru Cortex-A77 ano, ma onodu Cortex-A76 ano. Chọpụta!
A kụrụ aka maka Samsung: njedebe ya natara ihe nchekwa nche kwa ọnwa maka otu afọ
Anyị ekwesịghị inwe obi ụtọ na akụkọ a, ebe ọ bụ na ọ dị mkpa maka onye ọ bụla na-emepụta ihe, mana n'ihi enweghị ọtụtụ, anyị gosipụtara ya na Galaxy S8 / S9.
Oppo R17 Pro ga-enwe igwefoto igwefoto atọ na teknụzụ TOF
Ihe onyonyo ohuru na-akwado otu atụmatụ nke Oppo R17 Pro, igwefoto azụ atọ nwere teknụzụ ToF dị elu
Mbuynow Touch TWS, ekweisi ekwe ekwe Airpods naanị € 36.99 maka 38% Ego ịchekwara € 23
Igwe ntị ekwe ntị Mbuynow, Touch TWS bụ ekweisi Apple Airpods dị ọnụ ala nwere ogo ogo ya na ike ya.
Mbuynow, Igwefoto HD IP kachasị mma maka naanị € 35.99 maka ekele 40% ịchekwara € 24
M na-adụ gị ọdụ ka ị lelee ihe niile nke igwefoto Mbuynow IP HD a na-enye anyị ebe ọ bụ na ị ga-afụ ya.
Leaked ọhụrụ oyiyi na nkọwa nke Motorola One Power
New leaked nkọwa na Motorola One Power. Chọpụta ihe maka ika ọhụrụ gam akporo Otu ekwentị.
AGM na-eziga akwụkwọ ịkpọ oku maka mwepụta nke AGM X3 nwere isiokwu njọ
AGM, onye China nke na-emepụta mobiles rugged, na-enye oku ịkpọ oku maka mwepụta nke AGM X3, ha wee jiri isiokwu nke Ọnwụ ọnwụ.
Nokia 7 Plus enwetala mmeri nke EISA n'ụdị ekwentị kachasị mma
Nokia 7 Plus anatala onyinye EISA maka ekwentị kacha atụ aro n'ahịa. Chọpụta ihe banyere onyinye a dị mkpa!
Motorola na-akwado ekwentị ndị ga-emelite na gam akporo 9.0 achịcha
Motorola igwe kwadoro iji melite gam akporo 9.0 achịcha. Chọpụta ihe banyere ụdị ndị ga-enweta mmelite ahụ.
Coolpad Mega 5A, njedebe dị ala na ihuenyo 5.45 ″ HD + maka ihe na-erughị euro 90
Coolpad ewepụtala Mega 5A, ngwaọrụ ya kachasị ọhụrụ yana nkọwapụta teknụzụ dị ala na njiri mara.
Nkwekọrịta dị n'etiti Google na WhatsApp: akwụkwọ nkwado agaghị agụta dị ka oghere ejiri na Google Drive
N'ihi nkwekọrịta ọhụrụ dị n'etiti WhatsApp na Google, akwụkwọ nkwado nke akaụntụ WhatsApp gị agaghị agụta na akaụntụ Google Drive gị.
Vivo X23 isi ụdịdị leaked: 3D ihu ihu na ndị ọzọ
A na-edozi isi ihe dị na Vivo X23 n'ihu ya. Chọpụta ihe banyere ihe nke a mobile ga-ewetara anyị!
Honor 8X: Honor's New Big Screen ekwentị Leaked
Wepụtara nkọwa ndị mbụ nke Honor 8X. Chọpụta ihe banyere ekwentị a site n'aka ndị nrụpụta China nke na-apụ maka nnukwu ihuenyo ya.
Huawei Mate 20 ga-abata na Ọktọba
A ga-ewepụta Huawei Mate 20 na October. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ sitere n'aka ndị na-emepụta China nke ga-abata na ọdịda a.
Nokia nwere ike na-arụ ọrụ na a smart ọkà okwu
N'oge na-adịghị anya, Nokia ga-ewepụta okwu nke ya. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ụlọ ọrụ site na iji aka okwu okwu a.
Samsung kwupụtara Exynos 5100, modem mbụ 5G nke ụwa maka ekwentị
Samsung, ụlọ ọrụ South Korea, emeela Exynos 5100 ukara, nke mbụ 5G modem. Anyị na-agbasapụrụ gị ozi ọma!
Nyochaa Wavefun Super X tinyere 6-unit Express giveaway
Xiaomi Mi A2 na-enweta mmelite nke na-enye ya ohere ịdekọ ya na 1080p na 60fps
Xiaomi Mi A2 na-enweta mmelite ahụ kwekọrọ na ọnwa a, chọpụta ihe ndị ọzọ gbasara akụkọ a mpempe akwụkwọ a na-ewetara anyị!